Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबारे सर्बसाधारण बेखवर – Emountain TV
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबारे सर्बसाधारण बेखवर
काठमाडौं, २५ भदौ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अब स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको छ । पहिले स्वस्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारले संचालन गरिरहेका छन् ।
तर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका लागि अहिले पनि सर्वसाधारणले जिल्ला केन्द्र धाउनुपर्नै अवस्था रहेको छ । संविधानले आधारभुत मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य मातहत चलेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यति बेला स्थानीय तहलाई हस्तानतरण गरिएको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कम बजेट छुट्याएका कारण काम गर्न चुनौती रहेको प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा खासै आकर्षण देखिदँैन । उनीहरु ठूला अस्पतालबाट सेवा लिईरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जनताको आकर्षण भएपनि सेवा भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्रोत साधनको कमीका कारण अहिले पनि सर्वसाधारण जिल्ला केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार मातहत राखेको छ । तर स्रोत साधनका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।
काठमाडांै उपत्यकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा एक दिनमा २० देखि ३० जना सम्म सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन् । उपत्यकामा रहेको प्रथमिक स्वास्थ्य सेवा एउटा कोठामा संचालन भईरहेको छ । भौतिक संरचना नभएका कारण काम गर्न कठिन भएको कर्मचारीहरु बताउँछन ।
सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले भने प्राथमिक उपचार राम्रै पाईरहेको बताउँछन । अझ सेवालाई प्रवद्र्वन गर्दै लैजानु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा लगाएर प्रथमिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कोशिस गरेको छ । तर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नै काम भने हुनसकेको छैन । अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाहरुमा दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरणको कमी देखिन्छ ।
यस्ता छन् हरियो खुर्सानी खानुका फाईदाहरु
आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्ने
के तपाईको हात खुट्टा काप्छ? कतै पार्किन्सन्स् रोग त हाईन? जानी राखौँ (भिडियोसहित)
सुर्खेतका चिकित्सकलाई आन्दोलनले छोएन, आफ्नै कर्ममा तल्लिन
सरकारी चिकित्सकद्वारा आज पनि आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प